Shiinaha warshad dhinta WELI ROLLING DIIN | Chaoyue
QALANJOOJINTA JOOJINTA Dhimasho
Dhimashada xargaha duubku waa mid caadi u dhinta mashiinka miiqda mashiinka.Waxa laga sameeyaa qalabka HSS oo leh daaweynta carburizing.Waxaa loo isticmaalaa soo saarida dunta falka.
Mawjadeenna wareejinta waxay u dhiman tahay daboolka qallajinta, xoqitaanka xajmiga, is-qodista qashin, furitaanka, Qoryaha qoryaha, mashiinka mashiinka, Qalabka guryaha, Qalabka elektarooniga ah, Isku-darka iskudhafka, Blot, Nuts iyo boolal kale.
Waxaan soo saari karnaa isku-darka heerka ama sawirkaaga wareejinta. Annaguna waxaannu R&D ku kordhin karnaa shaybaarradaada iyo codsashada macaamiisha.
Waxaan leenahay koox farsamo oo adag waxaanna adeegsanay habka wax soo saarka kumbuyuutarka. Ka faa'iideyso Softwares-kii ugu dambeeyay sida CAD / CAM, Solidworks, si aad u sameyso tikniyoolajiyadda horumarsan ee injineerada waayeelka ah, khabiiro ku takhasusay daaweynta kuleylka iyo aqoonyahanada naqshadeeyayaasha.
Haddii aad amarto in dunta duubku dhinto, fadlan ii sheeg nooca mashiinka, cabbirka wasakhda, dhexroorka siligga, nooca fur, nooca ilkaha, dhererka dhererka, nooca dhibcaha, dhexroorrada dibadda, dhexroorka gudaha, iyo sawir fur.
L1: Joogtada dhererkeedu istaago
L2: Guuritaanka dhererka dhimashadu
S: dhumucdiisuna way dhimataa
H: Ballaadh u dhinto (Ku soo dhowaada boolal)
Waxaan ku soo qaadaneynaa badeecadaada, qalabkaaga, xulashada walxaha wanaagsan iyo farsamada wax soo saarka, waxaana ku siin doonaa xalka ugu fiican.
Ka habayn: 15 maalmood oo shaqo
Cabbirka Jaangooyada: 1 Set.
Lagu buuxiyey walxaha sunta lagu buufiyo iyo sanduuqa, 1 gogol / sanduuq.
Waxaan ku soo bandhigi karnaa 1-2Sets oo ah shaybaarro si aan u hubino cabbirka iyo tayada baaritaanka, laakiin waa inaad bixisaa kharashka iyo qiimaha rarka.
Waxaan haynaa in kabadan 20 sano oo waayo aragnimo xirfadeed ah soosaaraha dunta dunta dhinta.
Qiimahayagu waa mid macquul ah oo tayada ugu fiican u haya macaamiisha kasta.
Waxaan sameyn karnaa Foomka A, Foomka E, CO.
Hore: CARBIDE Dhimasho
Xiga: HEXAGON TRIMMING Dhimasho
Wareegista Wareejinta Wareegga Wareegtada ah
Dhimashada Dabiifka Flat